Nahazo Fahafahana Ireo Olom-pirenena Nizeriana Miisa Telo Ambinifolo Taorian’ny Fakana An-keriny Nataon’ny Boko Haram Nandritra Ny Volana Maromaro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Febroary 2018 4:55 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Ελληνικά, Italiano, русский, Español, Aymara, English
Nizeriana miisa telo ambinifolo no nalain'i Boko Haram an-keriny, fikambanana jihadista mpikatroka ao Nizeria, ary nahazo fahafahana tamin'ny Asabotsy 10 Febroary 2018. Nanamarika tao anaty fanambarana ny Komitin'ny Vokovoko Mena sy Volan-tsinana Mena Iraisam-pirenena (ICRC) fa “nanamora ny famerenana” indray ireo “polisy vehivavy miisa 10 sy ireo mpampianatry ny Oniversite miisa telo” avy tamin'ny Boko Haram ho an'ireo miaramila Nizeriana izy ireo:
Polisy vehivavy miisa folo no nalain'ny Boko Haram an-keriny tamin'ny volana Jona 2017 rehefa voalaza fa nanao fanafihana tampoka andiana tompon'andraikitry ny fiarovana tany amin'ny tanàndehibe avaratra-atsinanan'i Damboa, Fanjakana Borno ireo mpikomy. Namoaka lahatsary izy ireo taorian'izay izay nanambarany fa lasa “andevony” ireo polisy manampahefana.
Tahaka izany ihany koa, mpampianatra miisa telo avy amin'ny Oniversiten'i Maiduguri, any amin'ny Fanjakana Borno ihany koa no nalain'ny Boko Haram an-keriny tany amin'ny faritra Magumeri any amin'ny Fanjakana Borno, tany avaratra atsinanan'i Nizeria nandritra ny fitrandrahana solika tao amin'ny faritry ny Farihin'i Chad ny 25 Jolay 2017. Andro vitsy taty aoriana, namoaka lahatsary nampiseho ireo mpampianatry ny oniversite ny Boko Haram .
Boko Haram no tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesan'olona an'arivony, anisan'izany ny fanaovana vy very ny aina sy ny fanafihana nahery vaika nataon'ny mpikomy tany avaratra atsinanan'i Nizeria, any avaratr'i Kamerona sy Nizeria. Nitarika ny tenirohy iraisam-pirenena #BringBackOurGirls (Avereno ireo Zanakay vavy) taty aoriana ny fakàna an-keriny an'ireo mpianatra zazavavy miisa 276 tamin'ny taona 2014 izay nataon'ny Boko Haram tao Chibok, tany avaratra atsinanan'i Nizeria .
Nisaotra ny Avereno ireo Zanakay vavy (BBOG) ilay mpisera Twitter Jeff Okoroafor, olom-pirenena Nizeriana noho ny fanohanany naharitra ka nahatonga hatrany ilay fakàna an-keriny ireo olom-pirenena Nizeriana ho lohalaharana:
Fifidianana 2 andro izay
Fanabeazana 2 herinandro izay